Nolosha danbe iyo noolaha kale – Kaasho Maanka
Aadanaha iyo noolaha kale ma ahan kuwa kala maarmi kara ama si loo kala sooci karo. Waa kuwa ay dabeecaddu isku faraq xirtay, sidaasi daraadeedna jacayl iyo nacayb-ba wadaagay. Qofka ahlu jannaha ah, waa u baahanyahay inuu ku il-doogsado geelii uu aadka u jeclaa ee uu sidii caruurtiisa oo kale u daawan jiray. Kolba haddii caruurtaadii aad aadka u jeclayd aad ku kulmaysaan jannada haddiiba ay soo gudbaan imtixaanka (inkastoo dhashaada inta aanan soo gudbin imtixaanka naarta lagu soli doono halka aad adiguna khamri iyo naago dhexda uga jiri doonto jannada oo aad halkaas baqda guri doonto). Ka warran qofkii ka jeclaa geeliisa caruurtiisa amaba geela iyo caruurta u sinnaayeen?
Taariikhda Soomaalida waxaa ku suntan inuu nin aas u sameeyay oo uu xabaalay hashiisa oo geeriyootay. Hashaasi waxaa lagu magacaabi jiray Garawo, waxayna ku aasan tahay tuulada Garawo oo loogu magac daray hashan, kana tirsan Maamulka Soomaalida ee Itoobiya. Bal qiyaas ninkaasi sida ay ugu weynayd hashaasi! Soo wax laga argagaxo ma aha in uusan hashaas dib oo dambe u arkayn haddiiba uu janno calmado? Ninkaas teebaa u muhiimsan hashiisii oo uu dib ula midoobo iyo webiyada khamriga ah ee jannada lagu sheegay? Ilaahayna soo ceeb kuma ahan inuu ciid ka dhigo wax uu addoonkiisu u baahan yahay inuu ku il-doogsado?
Haddii aysan eeyo joogin jannada, dhimashadayda kadib waxaan doonayaa in aan aado halka ay aadeen eeyaha.
Jilaa Will Roger
Sidaas Roger si la mid ah abwaankeenii Soomaaliyeed ee Cabdi Gahar waa tuu isaguna lahaa “Aakhiro nimaan geel lahayn lama amaanayne”. Oraahyadani waxa ay muujinayaan jacaylka aadanuhu u qabay xayawaankii jaalka kula ahaa dunida. Diintuse oraahdani oo kale waxay u taqaan gaf diimeed lagu dhacay qofkana u horseedi karta naar, maadaama uu ku jeesjeesay aakhiro oo uu u ekaysiiyay meel geelu qiimo weyn ka leeyahay!
Diinteena macaan waxay noo sheegaysaa in neefkii neef kale gaf u gaystay xattaa looga aari doono aakhiro oo halkaasi ciqaab lagu marsiin doono, ciqaabta kadibna ciid laga dhigi doono. Balse iswaydiiya, maxay macno samaynaysaa in neef aan gaf u gaystay oo isagiiba ciid noqday aniga la iiga gudo gafkii, ayadoo waliba marka la i ciqaabo kadibna ciid la iga dhigi doono?
In ka badan 20% dadka dunida ku nool waa kuwa ka caaggan cunista hilibka, sida lagu daabacay barta Worldatlas sanadkii 2017, waana astaan kale oo muujinaysa sida ay dadku ugu damqanayaan noolaha kale oo ay u doonayaan in ay ku arkaan agagaarkooda wehelna kula ahaadaan dhulka. Inkastoo aan ogahay in dadka aysan ka naxariis badnaan karin illaaha naxariista oo idil loo tiriyay, haddana soo arrin murugteeda leh ma aha in kuwii aynu adduunka ku jeclayn aan aakhiro ka wayno oo ay ciid iska noqdaan, sidaasna aynu kaligeen jannada ku dhex taagnaano!
Aadanuhu kaligii ma jiri karo oo jiritaankeenna waxa uu ku lifaaqan yahay jiritaanka noolaha kale, bal haddii lagu yiri jannada waxaad ku quudanaysaa kalluun adba qiyaasoo kalluunkaas sidee ayuu ugu noolyahay jannada? Waxaa hubaal ah in sida aad adiga ugu quudanayso jannadda dhexdeeda kalluun uu kalluunkuna ugu quudanayo noole kale jannada dhexdeeda halkaasna waxaa ka unkamaya silsiladdii nafaqada iyo quudka ee noolayaasha. Haddana haddii janno nolol ka jirtaa, noloshaasi waxaa nala wadaagaya dhammaan noolihii kale, haddii aysan nala wadaaginna janno jiri kari mayso oo halka ay noolaha kale maraan ayaynu inaguna mari doonaa.
Ayga Cabdi Gahar Hasha Garawo janno Will Roger Xayawaan
W/Q: Gallad Gurxan 3rd August 2018